Guddiga Fulinta ONLF oo Shiray. Maxay Ka Wada Hadleen? - www.xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Guddiga Fulinta ONLF oo Shiray. Maxay Ka Wada Hadleen?
Published on Sunday, 27 October 2013 13:34	Xogta Shacabka (London) Shir dag dag ah oo ay Guddiga Fulinta ONLF shalay ku galeen is-gaadhsiinta SKYPE, ayay kaga wada hadleen qodob xasaasi ah sida ay ku waramayaana ilo wareedyo aad ugu dha dhaw hogaanka sare ee Jabhada. Kulankan oo ah mid ka soo hor maray waqtigisii ayay kalliftay xaalado dag dag ah oo soo food saaray hawlaha jabhada ONLF.
Isha an xogtan ka helany oo qoraal noogu soo diray ajandaha shirka guddiga fulinta ONLF waxay ka wada hadleen; cidda ay ku badalayaan xoghayihii OYSU Mujaahid Sheekh Ibraahim, cida ay ku badalayaan Abaanduulihii Ciidanka JWXO ee la qabtay Mukhtaar Axmad Sirad iyo sidii looga hor tagi lahaa kaadirka is-badal doonka ah.
Sidaan warkayagii hore ku sheegnay Mujaahid Sheekh Ibraahin ayaa dhawr maalmood kahor xilkii laga qaaday, waxayna guddiga fulinta jabhadu go’aa min doonaan cidii badali lahayd. Sidoo kale Mukhtaar Axmad Sirad oo ahaa abaanduulihii ciidanka ONLF ayaa dharaar dhaweyd laga daawadya telefishinka ESTV, isagoo la qabtay. Mukhtaar ayaa fariin digniin ah hawada u soo mariyay saraakiisha JWXO in cadawgu qaban doono hadii an xeelad cusub jabhadu la iman. Xilka Abaanduulaha Ciidanka oo ah kan ugu culus ONLF ayuu hada ka hor diiday inuu qabto Sanwayne shirkii Golaha Dhexe ee Asmara laba bilood ka hor, markaasi oo loo magacaabay Mukhtaar Axmad Sirad.
Dhanka kale sida u Gudoomiyaha ONLF, Admiral Maxamed Cumar kaga digay wareegtadii uu todobaadkii hore soo saaray waxaa isasoo taraya kawaadirta jabhada ee ku baaqaysa in isbadal dag dag ah iyo sixitaan lagu sameeyo hogaanka Jabhada ONLF, sidaasi darteedna ay guddiga fulintu ka arrinsanayaan siday ula tacaali lahaayeen xubnahaasi.
Inkastoo aanan wali helin go’aamada ay guddiga fulintu qodobadaasi ka qaateen, waxaan ku raja waynahay inay ila wareedyadanadu na soo gaadhsiin doonaan, si dag dag ahna an u soo daabici doono.